Somaliland ayaa ku dhawaaqdey in degaanadeeda laga helay kiisaskii ugu horeeyay ee Coronavirus. Riix Halkan
By WARIYAHA GAROWE ONLINE , Buuhoodle
BUUHOODLE, Puntland- Waxgaradka kasoo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn oo kulan ku yeeshay magaalada Buuhoodle ayaa ka hadlay xiisadda u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland waxayna xukuumadda Hargaysa ugu baaqeen inay isaga baxaan meelaha ay kaga sugan saddexdaas gobol.
Odoyaasha dhaqanka oo qaybtood shirkaas uga qayb galay khadadka Taleefonka waxay sheegeen inay wax ka dhisteen maamulka Puntland islamarkaana been abuur tahay xuduuda ay ku doodayso Somaliland.
Suldaan Siciid Cismaan Cali iyo Garaad Saleebaan Buraale oo ka hadlayay colaada ka taagan Tukaraq iyo sheegashada Somaliland ee gobollada SSC ayaa sheegay inay horay u cadeeyeen hadana cadaynayaan inaysan dowlad la lahayn Somaliland islamarkaana aysan wax heshiis ah la galin.
Waxay tilmaameen in mudadii Somaliland joogtay gobolladan ay baajinayeen dhiig daata, balse xukuumadda Hargaysa ay u tafa xaydatay inay kusoo duusho shacabka gobolka Sool islamarkaana hubkeedii kusoo daad gurayso Tukaraq, waa sida ay hadalka u dhaheene.
"Waxaan u sheegaynaa beesha Caalamka anagu Puntland baan wax wada dhisanay, laakiin walaalahayo Waqooyi heshiis kuma nihin," ayuu yiri Garaad Saleebaan Buraale.
Boqor Cabdullaahi Axmed Cali oo khadka Taleefonka uga qayb galay shirkaas ayaa yiri, "Xadka nimankaas sheegayaan waa Labida Gaatama England dalka waa wada xukumay."
Sidoo kale Garaad Saleebaan Garaad Maxamed oo goobta ka maqnaa balse isgaarsiinta kaga qayb galay ayaa si cad uga horyimid qorshaha Somaliland ku sheegaynayso gobollada SSC isagoo xusay inaysan jirin meel ay wax kuwada dhisteen iyo bar ay heshiis ku yihiin.
Hadalka waxgaradka ayaa yimid xilli xukuumadda Hargaysa caburin ka wado magaalada Laas-caano iyagoo xabsiga u taxaabay dad badan oo shacab ah kuwaasoo bannaanbax ka dhigay xarunta gobolka Sool.
Yaa ka dambeeya ciidanka kasoo goostay Somaliland?
Puntland 12.02.2018. 02:03
Wararka soo gaaraya Warsidaha Garowe Online ayaa sheegaya in Ciidamo gaaraya 160 Askari...
Warbixin: Qaabka Doorashada Somaliland uga dhacday Sool iyo Sanaag
Somaliland 14.11.2017. 02:00
Puntland: Camey oo lagu wareejiyay Ciidamo iyo Gaadiid dagaal
Puntland 01.06.2018. 20:05
Guddiga Difaaca Puntland oo ka hadlay xiisadda ka taagan gobolka Sool
Puntland 28.05.2018. 16:38
Dagaal khasaaro geestay oo ka dhacay gobolka Sool
Puntland 23.12.2017. 15:39
Puntland oo dad lagu tuhmay Covid-19 ku wareejineysa Galmudug 01.04.2020. 08:07
Taliyaha Ciidamada Soomaaliya oo "ka badbaadey" isku day dil 01.04.2020. 07:29
Fayruska Corona oo dib-u-dhac ku keenay doorashooyinka Itoobiya 31.03.2020. 21:22
Somaliland oo xaqiijisay kiisaskii ugu horeeyay ee Coronavirus 31.03.2020. 18:47
Al-Shabaab oo fagaare ku toogatay rag ay ku eedeysay jaajuusnimo 31.03.2020. 18:39
Shanta waddan ee dadka ugu badan uu ka dilay fayruska Corona 31.03.2020. 17:25